Fikradaha xayeysiinta: waa maxay fikradaha qaldan iyo astaamaha lagu garto | Hal-abuurka khadka tooska ah
Had iyo jeer bulsho ahaan waxa aynu ku noolaynay hab-dhaqanno is-daba-joog ah oo ilaa hadda inagu suntay. Qaar iyaga ka mid ah ayaa loo arkay inay galmoodaan, qaar kalena khaniis nacayb, cunsuri ama dhinac kasta oo kale oo xun. Taasi waa sababta fikradahan khaldan ay had iyo jeer ku xiran yihiin warbaahinta xayeysiinta sidoo kale.
Taasi waa sababta qoraalkan, Waxa aanu u nimid in aanu kaala hadalno fikradahan qaldan iyo sida ay u saameeyaan si uun ama si kaleba dhanka xayaysiinta. Intaa waxa dheer, waxaanu kuu sharxi doonaa fikradaha khaldan ee sida weyn u saameeyay warbaahinta xayaysiisyada iyo sida xayeysiisyadu u keeneen mala-awaal iyo su'aalo badan oo daawadayaasha ah.
1 Fikradaha la iska aaminsan yahay
1.1.1 Soo jiidasho leh
1.1.2 doorarka khayaaliga ah
1.1.3 Isku dhacyada bulshada
2 Noocyada fikradaha xayeysiiska
2.1 Fasiraadda shaxanka labka ah sida kan ugu xooggan uguna xoogga badan
2.2 Doorka ninka iyo mashiinka
2.3 Haweenka, xayeysiiska iyo baabuurta
2.4 "Kubadda wiilka iyo jikada gabadha"
3 Doorarka kala duwan
Fikradaha la iska aaminsan yahay
Kahor intaanan galin aduunka xayeysiinta, waxaan rabnaa inaan xooga saarno ereyga stereotype.
Marka loo eego qaamuuska, ereygan waxaa loola jeedaa sawir ama fikrad u eg oo ay caadiyan aqbaleen koox bulsho oo gaar ah. Sawirradan waxaa lagu shardiyaa arrimo kale oo dabeecad bulsheed, sida da'da, jinsiga, muuqaalka jireed ee qofka, diinta uu u jeedo, iwm.
Gaaban, Badanaa waa dhinacyo sida xun u saameeya bulshada aan ku dhex nool nahay. Dhab ahaantii, waxaa loo tixgeliyaa dhinacyo taban sababtoo ah waxay ku raran yihiin nacaybka dadka kale.
Tusaalaha degdega ah ee qaab-dhismeed xayeysiisku wuxuu noqon karaa isticmaalka sawirka dheddigga ee nigisyada halkaas oo loogu talagalay in lagu soo jiito dareenka daawadayaasha oo fariintu ay noqoto mid aan la dareemin. Waa hab lagu galmoodo dumarka oo lagu matalo muuqaal aan ku habboonayn farriinta dhabta ah ee la doonayo in la gudbiyo.
Dabeecadaha ma aha oo kaliya waxay caawiyaan alaabta in loo iibiyo si cad oo toos ah, laakiin waxay kuu soo dhawaynayaan dadweynaha aad la hadli doonto mar kasta.
doorarka khayaaliga ah
Dhibka ka haysta cuqdadahaas ayaa ah inay u janjeeraan inay door ku abuuraan dad aan jirin. Oo tani maaha dhibka kaliya, sababtoo ah dad badan ayaa laga yaabaa inaysan aqbalin. Dhibaatadu waxay tahay in ay yihiin halbeeg, tani waxay dhacdaa marka qaabka garashada isku midka ah ayaa lagu soo noqnoqdaa marar badan sidaas darteed, fariin gaar ah ayaa la abuuray taas oo loo arko wax macquul ah oo caadi ah.
Tusaale ahaan, midabka buluuga ah wuxuu had iyo jeer ku xiran yahay wiilasha iyo midabka casaanka ah ee gabdhaha, dhab ahaantii, haddii aan ka baarno internetka waxa aan la xiriirno midabka casaanka ama buluugga ah, ereyga ayaa isla markiiba soo baxaya. dumarnimo.
Isku dhacyada bulshada
Fikradaha la iska aaminsan yahay waxay abuuraan iska hor imaadyo bulsheed taas oo ay sabab u tahay isfaham la’aanta fariinta la rabay in la isku gudbiyo tan iyo markii ugu horeysay. Xayeysiisyo badan ayaa qasab noqotay in la diido taas oo ay ugu wacan tahay guux badan oo ay ka abuureen warbaahin badan oo online ah.
Marka la soo koobo, fikradaha khaldan ayaa had iyo jeer loo tixgaliyaa dhinacyo taban oo, ka sokow wax qabad iyo soo jiidasho, u suurtagashay in ay abuuraan habab khaldan oo bulshadeena ah.
Marka xigta, waxaan wax badan ka sharixi doonaa fikradaha qaldan waxaanan ku tusi doonaa qaar ka mid ah tusaalooyinka ugu caansan aduunka ee telefishinka iyo xayaysiinta.
Noocyada fikradaha xayeysiiska
Xigasho: Wargeyska Xayeysiiska
Fasiraadda shaxanka labka ah sida kan ugu xooggan uguna xoogga badan
Xayeysiisyo badan, ninka labka ah ayaa had iyo jeer loo isticmaali jiray in lagu tarjumo oo loo labbisto sidii geesinimo sare, oo lagu buuxiyey muruq iyo xoog. Intaa waxaa dheer, dharka buluuga ah waligiis kama maqna, midab, sida kor ku xusan, had iyo jeer lala xiriiriyo ragga.
Intaa waxaa dheer, ma aha lagama maarmaan in la galo adduunka geesiyaasha si ay u muujiyaan tusaale kale, filimo badan sawirka ninku waa kan kaliya ee ganacsi samayn kara oo gaari kara ujeedooyinkooda. Dhinac kale oo saameyn weyn ku yeeshay.
Doorka ninka iyo mashiinka
Haddii aan sii wadno hadalka ku saabsan shaxanka labka ah, waxaan ku nimid gabagabada in ninku, sida xayeysiisyada xayeysiiska, had iyo jeer loo soo bandhigay sida ciyaarta Mario Bros, oo ah dabeecad samatabbixinaysa amiirad cidhiidhi ah.
Intaa waxaa dheer, xayeysiisyada ugu badan ee ka hadla tiknoolajiyada ama qalabka dhismaha, dabeecadda ugu weyn ama tirada ugu weyn ee xayeysiisku waa ninka. Mar dhif ah ayaan arki doonnaa qof dumar ah oo dubbe haya, Haddii kale, xayaysiisyada iyo bulshada dhexdeeda, sawirkan ayaa had iyo jeer loo arkaa mid aan habooneyn marka la eego jinsiga.
Haweenka, xayeysiiska iyo baabuurta
Waa run in hadda, shirkado badan oo baabuurta sida Audi ama Cupra ay u adeegsadeen tiro dumar ah xayaysiisyadooda ama meelaha. Laakiin haddii aan dib u jaleecno, "caadiga ah" shirkado badan ayaa ahaa in ay isticmaalaan sawirka nin kaxeynaya baabuur-dhamaadka sare ee muuqaalka buuraha leh xawaare buuxa.
Maanta doorkani waa mid ka yara aqoon badan kuwii hore. Tusaale ahaan, Cupra waxay isticmaashay sawirka Alexia, ciyaaryahanka FC Barcelona, ​​sida sawirka ugu muhiimsan ee goobta.
"Kubadda wiilka iyo jikada gabadha"
Bal qiyaas xaalad sidan oo kale ah: Wakhtiga Christmas-ka iyo cashada qoyska, waa waqtigii la qaybin lahaa hadiyadaha iyo... yaab! Wiilkii wuxuu helay kubbadda cusub ee Champions League, gabadhuna waxay heshay jiko sidoo kale leh muusig ku dhex jira, si aan ' Aad isku buuqdo markaad quraacda diyaarinayso.
Waxaana laga yaabaa inaad is waydiiso waxa keenay xaaladan gaarka ah, sababtoo ah jawaabtu waxay ku jirtaa xayaysiisyada, xayaysiisyada ayaa masuul ka ahaa in wiilku uu yahay ciyaaryahan weyn oo kubada cagta ah iyo in gabadhu ay noqoto guri guri oo wanaagsan. Sidoo kale, hubso in jikada ay tahay casaan, kabaha kubbadda cagta ilmuhuna ay buluug yihiin. Dhammaan doorarkan khaldan iyo kuwa khiyaaliga ah ee ay xayeysiisku hindiseen waxay ka dhigeen qayb ka mid ah bulshadeena maanta.
Sidaa darteed, guud ahaan, ma noqon doonto in lagu daro midab kasta oo jinsi gaar ah, iyo sidoo kale ciyaar kasta iyo waxqabad kasta oo la xidhiidha guriga.
Waxa jira fikrado badan oo xayaysiisku abuuray sanadihii la soo dhaafay. Laakiin kuwani weligood waxay ahaayeen kuwa ugu badan.
Doorarka kala duwan
Xigasho: The Defined
Gabadha xayaysiisyada ku jirta ayaa had iyo jeer lagu qeexaa inay tahay qof daciif ah oo is dhiibta taasoo ku qasbanaaday inay la noolaato jilayaal ay ka mid yihiin: xaaska guriga, xaaska ama hooyada, haddii ay dibadda ka shaqeyso waa xoghaye, kalkaaliye ama qareen. Xayaysiisyo badan, waxaa lagu muujiyaa iibinta alaabada quruxda sida lipstick ama hooska indhaha, ama alaabta guriga: nadiifiyaha dhalada, iwm.
Mararka qaarkood, waxay sidoo kale ahayd wax soo saarka quruxda ama rabitaan lagu soo jiito dareenka daawadaha. Tani waxay ku dhacdaa xayaysiisyada dharka dumarka ee dumarka, halkaas oo ujeeddada ugu weyni aysan ahayn dharka hoostiisa, laakiin qaabka qaabka. Laakiin haddii aan eegno warka maanta, xayeysiisku wuxuu sii waday door isku mid ah laakiin fikradda haweeneyda sare ayaa lagu dabaqay. Naag xoog badan ayaa isu diyaarisay inay wax ka qabato hawlaha guriga iyo daryeelka carruurta.
Nasiib darro, nacaybka ka jira goobta xayeysiinta ayaa sii wadi doona inay iskood u qabsadaan. Xariiq aad u sii fiicnaanaya oo ka gudbaya shaashado badan oo sidaas darteed, khilaafyo badan oo dabeecadda bulsheed ayaa abuurma.
Sidoo kale ninka waxaa ku badan hawlo aan jirin. Xayaysiinta ama xitaa goobta shaleemada, Shaxda labka ah ayaa had iyo jeer tilmaamaysa gardaro gaar ah, hab-dhaqan badan, xasilooni, xoog iyo awood.
Waqtigan xaadirka ah, sawirka ninka ayaa sidoo kale loo arkaa shay xayeysiisyo badan. Halka ay ku saabsan tahay sarraysiinta iyo siinta qiimo badan oo muuqaal ah oo ka badan waxa dhabta ah ee ka dambeeya farriinta. Shaki la'aan, labada noocba waxay la kulmeen cuqdado badan oo aan sax ahayn oo nasiib daro hadda la siiyay magac aad u badan.
Mar kasta oo naloo soo bandhigo ereyga qaan-gaarka, maskaxdeennu waxay ka fikirtaa qaybo ka mid ah dadka ay ka muuqato dhalinyaradooda, kuwaas oo aan kalsooni ku qabin naftooda, sidaas darteed, loo arko dad aan degganeyn.. Laakiin wax kastaa ma xuma, xayeysiisku wuxuu sidoo kale mas'uul ka ahaa inay ka faa'iideystaan ​​iyaga oo u soo bandhigaya inay yihiin dad madaxbannaan.
Goobta xayeysiinta, dhalinyarada ayaa had iyo jeer loo isticmaali jiray koox bulsheed oo danayste ah, oo awood u leh inay u fekeraan oo kaliya naftooda iyo oo ay ku hareeraysan yihiin fikrado ku dhex jira xafladaha, isticmaalka maandooriyaha ama farsamada casriga ah.
Shaki la'aan door kale oo ka tagay colaado badan.
Sidaan u falanqeynay, xayeysiisku waxa uu qaabeeyay hal door, isaga oo isku daray dhinacyada bulshada sida jinsiga, da'da ama diinta oo uu isu keenay si ay u abuuraan qaabab gebi ahaanba khaldan. Nasiib wanaag, in badan oo ka mid ah xayaysiisyada aan aragno maanta waxay ka guureen dhinacyadan jinsiga ah. Markaa aad ugama roona inaad awooddo inaad aragto xayaysiisyada iyada oo aan loo baahnayn in la abuuro isku dhacyo.
Waxaan rajeyneynaa inaad wax yar ka baratay "dhinaca mugdiga" ee xayaysiinta oo aad sii waddo raadinta fikrado badan oo xiiso leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » fikradaha xayeysiiska